Baarlamaanka Puntland oo si kulul ula xisaabtamay hoggaanka bilayska Puntland iyo wasaaradda caddaaladda, waxna ka waydiiyey amniga iyo garsoorka. – Radio Daljir
Baarlamaanka Puntland oo si kulul ula xisaabtamay hoggaanka bilayska Puntland iyo wasaaradda caddaaladda, waxna ka waydiiyey amniga iyo garsoorka.
Garowe, July 06 – Golaha wakiillada Puntland ayaa shalay la xisaabtan mas’uuliyadeed la yeeshay hay’addo ka tirsan dawladda gaar ahaan wasaaradda caddaaladda iyo hoggaanka ciidamada bilayska iyo asluubta Puntland.
Xildhibaannada baarlamaanka Puntland oo u ekaa kuwo u oomanaa la xisaabtamidda taliyaha iyo wasiirka wasaaradda caddaallada ayaa taliya wax ka waydiiyey amniga xumada haraysay deegaannada Puntland gaar ahaanna magaalooyinka Galkacyo iyo Bossaso, daryeel la’aanta ciidamada bilayska ee ka hawl-gala degmooyinka durugsan, tabar-darida iyo tayo xumada ciidanka sirdoonka, u taagwaaga iyo ka takhalusid la’aanta bacaha madoow ee baarbuurta lagu dhajiyo iyo arrimo kale oo dhammnaantood la xiriir ammaanka Puntland.
Taliyaha ciidanka bilayska iyo asluubta Puntland Gaashaanle sare Cali Nuur Cumar, oo ka jawaabayey su’aalaha xildhibaannada, sharraxaadna ka bixinayey dhibaatooyinka amni ee laga sharqamiyey ayaa sheegay wax ka qabashada arrintaasi bilays ahaan in ay dadaal dheer u galeen awooddana la saaray labada magaalo ee Bossaso iyo Galkacyo hase ahaatee wali aan la gaarin guulihii bulshadu u baahnaayeen. Taliyuhu waxaa uu sheegay in ay jirto dhibaato xogga bulshada ah oo ay gabbaad ku siiyaan dambiilayaasha, aysanna jiriba dhiifoonaan la xiriirta sidii ay uga il-bogan lahaayeen qofka dhibka gaysta.
Dhinaca kale wasiirka wasaaradda caddaaladda Puntland Cabdikhaliif Sh. Xasan ‘Ajaayo’ oo isna golaha horyimid si loola xisaabtamo ayaa isna su’aalo laga waydiiyey arrimo badan oo mudanayaashu ay sheegeen in ay wasaaraddiisu gabtay wax ka qabashadooda kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen caddaaladda, garsooridda, dhawrista anshaxa iyo dhaqanka wanaagsan, waxaana kaloo wax laga waydiiyey kor u qaadid la’aanta aqoonta diineed iyo midda maaddi ee waaxaha garsoorka.
La-xisaabtan mudanayaasha golaha baarlamaanka Puntland ay la xisaabtameen hoggaanka bilayska iyo wasiirka caddaaladda ayaa yimid xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu aad u siiliidanayey amniga Puntland, laguna dhaliilayey ciidamada bilayska in ay gabeen wax ka qabashada falal dambiyeedyada, dhinaca kalena ay jirtay wax-tabasho xooggan oo la xiriirta caddaaladda iyo garsoorka Puntland.